Shiikh Shariif ayaa eedayn u soo jeediyay Ururka Midawga Afrika | maakhir.com
Shiikh Shariif ayaa eedayn u soo jeediyay Ururka Midawga Afrika
Asmara:- Gudoomiyihaha Ururka dibu xoraynta umada Somaliyeed ee fadhigoodu yahay Magaalada Asmara ayaa eedayn kulul dusha uga tuuray Ururka Midawga Afrika isaga oo sheegay inay Masuul ka yihiin dhibaatooyinka ka taagan Dalka Somaliya gaar ahaan Caasimada Dalka ee Muqdisho, Shiikhu waxa uu sheegay inay wadaan arin khaldan.
Sheekh Shariif wuxuu ku eedeeyay Midowga Afrika inuusan dhex dhexaad ka ahayn arrimaha Soomaaliya sidaasi darteed aanu xalaal ahayn sida uu hadalka uu u dhigay Sheekh Shariif, safarkii uu dhowaan Muqdisho ku tegay Siciid Djinnit madaxa golaha amniga ee Midowga afrika.
Waxa uu sheegay inaanu Masuulkaasi tegay Muqdisho aanu wax wada hadal ah la yeelan kooxaha ka soo horjeeda Dawlada Somaliya e uu la kul may uun dhanka Dawlada Somaliya taasina waxa uu ku til maamay arin keeni kara inay sii socdaan dagaaladu.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu kaloo sheegay inaanay suurtagal ahayn in uu dhaco wadahadal dhexmara iyaga iyo dowladda Somaliya ah isagoo taa sabab uga dhigay in aanay iswaafaqsanayn hadalka ra’iisal wasaare Nuur Cadde iyo madaxweyne C/laahi Yuusuf Axmed oo uu sheegay inay iyaga is hayaan waa sida uu hadalka u dhegayay.
Shiikh Shariif waxa uu soo qaatay dhanka kale Dagaalada ka oogan Gudaha Caasimada Somaliya ee Muqdisgo isaga oo sheegay inay maalin kasta ku naf waayaan Kumanaan Ruux kuwa kalena ay barakacayaan, Shariifku waxa uu sheegay inay jiraan wali dagaalo xoogan oo ka taagan Muqdisho kuwaasi oo ay wadaan Kooxaha wax iska caabinta.
Hadalka Shiikh Shariif ayaa waxa uu ku soo aadaya xili ay dhawaan ku dhawaqeen Ururka Midawga Afrika inay keenayaa Dalka Somaliya Ciidamo ka socoda Q.M kuwaasi oo bedeli doona kuwa haatan jooga.
« Dagaal Culus ayaa ka dhacay Deegaanka Balli doogle
Mid ka mid ah Wariyaasha Idaacada SBC oo Jeelka loo taxaabay maanta »